Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || होसियार ! तीव्र गतिमा चलाए कडा कारबाही, ‘राडर गन‘ले गर्छ जाँच – kayakairan.com
होसियार ! तीव्र गतिमा चलाए कडा कारबाही, ‘राडर गन‘ले गर्छ जाँच
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०३:२२
भरतपुर, १५ असोज
३ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामनगरले तीव्र गतीमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही अभियान चलाएको छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति हुने गरेकाले गति मापन कार्यलाई तीव्र बनाएको हो । गतवर्षको दुर्घटना विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना तीव्र गतिकै कारण भएको पाइएको छ ।
गतवर्ष ३ नम्बर प्रदेशका १० जिल्लामा ७ सय ७६ वटा दुर्घटना भएका थिए । जसमध्ये तीव्र गतीका कारण ३ सय ३६ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए । चालकको लापरबाहीका कारण ३ सय वटा, मादक पदार्थ सेवनका कारण ५० वटा, ओभरटेकका कारण २२ वटा, यान्त्रिक गढबडीले १८ वटा दुर्घटना भएका थिए । दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म २ सय ८८ वटा, विहान ६ बजेदेखि १२ बजेसम्म १ सय ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।
“चालक तथा यात्रुलाई ट्राफिक नियमबारे अडियो, भिडियो सामग्री वितरण अभियानै चलाएका छौँ”, प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश रानाभाटले भने, “ट्राफिक कक्षा पनि चलाएका छौँ ।” गति नियन्त्रण गर्न ‘राडर गन’मार्फत आकस्मिक चेकजाँच बढाइएको बताए । उनले ट्राफिक नियम पटके उल्लंघन गर्नेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नै खारेजीका लागि सिफारिस गरिने बताए । नियम उल्लंघन गर्ने चालकको विवरण ‘डिजिटलाइज’ गरेर ५ पटक बढी नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्सनै खारेजी गरिने बताए । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा तेम्बर बढी सवारी दुर्घटना हुन थालेको बताए । “जनशक्ति ज्यादै न्यून छ, ग्रामीण क्षेत्रमा सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “सचेतना मार्फत दुर्घटनाको न्यूनिकरणको प्रयास भइरहेको छ ।”
चाडबाडमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाडबाडमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम देखिएको जनाएको छ । सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, तीव्र गतिमा चलाउने, मादक पदार्थको सेवन गर्ने जस्ता कारणले चाडबाडमा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने गर्छ । साँघुरा सडक तथा मोडहरुमा सवारी चाप बढी हुदा दुर्घटना बढी नै हुन्छन् । “दशैं तिहार सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छ”, ट्राफिक प्रमुख रानाभाटले भने, “विशेष चेकिङ, रात्रि चेकिङलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”
ओभरलोड गरी ढुवानी गर्ने २४ सवारी कारबाहीमा परिसकेको बताए । गतवर्ष १० जिल्लाको दुर्घटना केलाउँदा असोज, कात्तिक र मंसिरमा ३ सय ७१ वटा दुर्घटना भएका थिए । जसमध्ये १ सय ३१ वटा मोटरसाइकल, ४३ वटा ट्रक, ३६ वटा बस, ३२ वटा कार–जीप दुर्घटनामा परेका थिए । गतवर्ष प्रदेशका जिल्लाहरुमा चितवन दुर्घटना हुने जिल्लाका रुपमा चिनिएको छ । चितवनमा ४ सय ५६, धादिङमा २ सय ३, नुवाकोटमा ९४ वटा सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।
दुर्घटना बढ्यो, राजश्व घट्यो
३ नम्बर प्रदेशका १० जिल्लामा तीन वर्षीय विवरण केलाउँदा दुर्घटना संख्या बढेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कम कारबाही गरिएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा २ लाख १७ हजार ७ सय ६२ चालकलाई कारवाही गर्दा १५ करोड २८ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
२०७४–७५ मा २ लाख ३ सय ५६ चालक कारवाही गर्दा १३ करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्ष १ लाख ९३ हजार ५ सय ११ चालक कारबाही गर्दा १३ करोड १ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वर्ष दुई महिनामा २७ हजार ८ सय ४० चालक कारवाही गर्दा १ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
“राजस्व संकलन बढाउने हाम्रो लक्ष्य होइन, ट्राफिक नियम सबैले पालना गरुन् भन्ने हो”, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जीतेन्द्रकुमार बस्नेतले भने, “ट्राफिक नियम पालना नगर्नेको संख्या घट्दो छ, ट्राफिक सक्रियताको परिणाम हो ।” उनले पछिल्लो दुई महिनाको कारवाही संख्यालाई आधार मान्दा यो वर्ष २० करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान गर्न सकिने बताए । ०७३–७४ मा ६ सय २१ दुर्घटना हुदा ४ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ०७४–७५ मा ७ सय ११ दुर्घटना हुदा ४ सय ७० जनाले ज्यान गुमाए । गत वर्ष ७ सय ७६ दुर्घटनाहुदा ४ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाए । यो वर्ष १ सय ३० दुर्घटनामा ७१ जनाले ज्यान गुमाए ।